Sakafo alika: Sakafo natokana ho azy, fironana vaovao | Alika Manerantany
Sakafo alika: sakafo manokana, fironana vaovao
Admin World World | | Fahano alika sy alika kely
Ny alika dia tsy ny biby fiompy mahazatra indrindra ao an-tranontsika. Anisan'ny fianakaviana izy ireo, mpikambana iray hafa ary koa ... ny namantsika akaiky indrindra. Ireo tia ny tompony izay eo foana, eo anilanay, na inona na inona mitranga. Voalaza fa ny biby fiompy, alika, mamerina ilay fitiavana omena azy ireo ampitomboina folo. Miezaka ny hanao toy izany koa izahay ary ny dingana voalohany dia miorina amin'ny sakafonao.
Ho an'ny fikarakarana ny alikay, tahaka ny mitranga amin'ny zanak'olombelona, ​​ny singa fototra voalohany dia ny sakafo hanintsika. Izay nohaninay isan'andro. Ny sakafon'alika Tokony amin'ny ambaratonga mifanaraka amin'ny ilainao rehetra izany. Tahaka ny tsy itovizantsika sy ny vatantsika mangataka sakafo sasany amintsika nefa mandà ny hafa; mety ho fantatra ihany koa inona no ilain'ny alikanay ao anatin'io karazana formulaire io mba hamaly ny filan'ny biby tsirairay.
Raha ny lanjany, ny taonany, ny lahy sy ny vavy, ny karazany (raha lehibe na kely), raha misy allergie, be loatra, aretin'ny aty ... izany no maha-zava-dehibe ny fisavana maso isam-bolana ny biby fiompintsika ary izay matoky anay ny mpitsabo biby anay fanampiana ara-tsakafo izay ilaintsika ho an'ireo namantsika kely indrindra. ny sakafo alika kalitao izy ireo dia ampifanarahana amin'ny filàna izay tianay horesahina.
Ilaina ihany koa ny fahalalana ny fatra marina amin'ny sakafo azontsika omena ny biby fiompintsika ary koa ny fidirana isan'andro izay azontsika omena azy. Zava-dehibe ny mahafeno ny sakafo safidintsika toetra mahavelona ary afaka mankafy azy io ny alikantsika. Ary io no marika mihamaro hatrany sakafo manokana ho an'ny alika miaraka amin'ny ekipa mpitsabo sakafo sy mpitsabo biby izay afaka manampy antsika sy manoro hevitra antsika rehefa misafidy ny vokatra ilain'ny biby fiompintsika.
Ary io dia nandritra ny taona faramparany ny safidy hisintona ny famahanana voamaina na heveriko fa ny biby fiompy dia efa nohadihadiana, mihevitra azy io ho 'nanampy' ny sakafon-kaninina amin'ny ankapobeny. Fa ny marina dia manome sakafo mahavelona ny sakafom-biby, anisan'izany ny proteinina, izay tena ilaina amin'ny alika. Ireo mpitsabo biby dia miahiahy bebe kokoa amin'ny fiakaran'ny sakafo hafa sy tsy mahazatra miaraka amin'ny otrikaina sy zavatra simika avy any ivelany. Betsaka ny matihanina manako ny fiakaran'ny tranga misy amin'ny tompona izay manome sakafo ratsy ary ny alika marary.
Izany no mahatonga azy io ho lasa ifotony manampy amin'ny fifehezana ny olan'ny fahasalaman'ny biby fiompinay sy hanatsara ny kalitaon'ny fiainany araka izay azo atao manome otrikaina mahasalama isaky ny afaka ary kalitao voajanahary. Rehefa mitady ny sakafon'ny alikantsika isika dia tsy maintsy mahazo antoka fa manana proteinina sy gliosida izy ireo noho ny fiasan'ny gastrointestinal marina, fa mora levona izy ireo. Ilaina ihany koa ny 'mandositra' ny siramamy ampiana sy additives.
Ny tanjon'ny biby fiompintsika dia ny fahasalamana sy ny kalitaon'ny fiainana, noho izany, ny fikarohana izany sakafo mahasalama ary mahay mandanjalanja ilainao. Ary ny hahafantarana, ambonin'izany rehetra izany, miankina amin'ny karazany sy ny toetrany manokana, ny alikantsika dia mety mila sakafo manokana misy singa toy ny calcium sy vitamina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fahano alika sy alika kely » Sakafo alika: sakafo manokana, fironana vaovao
Alika Buhund norveziana
Alika soedoa Vallhund alika